तिमीलाई सीमारेखा बुझाइदिन बिर्सिन्छु कि छोरा! :: Setopati
प्रतिमा सिलवाल मंसिर २
तिमी मेरै रहरले जन्मिएको हौ। तिम्रो बाबा र मैले सन्तानको अभिभावक बन्ने चाहनामा नै तिमी मेरो कोखमा आयौ। हामीले मात्र सन्तानको रहर गरेका थियौँ। सन्तानको रुपमा तिमी (छोरा) नै होला भन्ने कहिल्यै कल्पना गरेनौँ, न त चाहना नै। हामी मात्र सन्तान चाहन्थ्यौँ। हाम्रो सन्तानको रुपमा तिमी (छोरा) जन्मियौ। हामी पूर्ण (आमा/बाबा) बन्यौँ।
बाबु! हिजोआज मेरो कानमा मैले जस्तै जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेर जन्माएका तिमीजस्तै छोराको कारण कलिला छोरीहरुको चित्कार गुञ्जिन थालेको छ। कहिलेकाहीँ त म त्यसै आत्तिन्छु, रातसाँझ हिँड्दा म आफै पनि तिमीलाई आज जसरी नै स्तनपान गर्न आइपुग्छु कि आइपुग्दिन!
तिमी जस्तै सन्तान जन्माउने क्षमता भएका छोरीहरु त्यही पाठेघर र योनी भएका कारण असुरक्षित भएका छन् हिजोआज। म यो सोच्दा पनि कायल बन्न थालेको छु छोरा, कतै मैले पनि तिमीलाई दिने संस्कारमा कमी आउने होकी?
मेरा साथीहरु (छोरीका आमाबुबा) आफ्ना छोरीलाई कराते, तेक्वान्दो सिकाउन चाहन्छन्। किन, तिमीलाई थाहा छ? उनीहरु आफ्ना छोरी आत्मरक्षा गर्न स्वयं सकून् भन्ने चाहन्छन्। आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न एक्लै हुँदापनि सकून् भन्ने चाहन्छन्। मेरा साथीहरुका त्यो कुरा सुन्दा मेरो छाती कति चर्किन्छ, तिमी सायदै अनुभव गर्न सक्छौ।
तिमीजस्तै छोराहरुबाट जोगिनको लागि उनीहरुले आत्मरक्षा सिक्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना! जान्ने भएपछि पक्कै तिमीले महशुस गर्नेछौ। म पनि चाहन्छु छोरा, तिमी पनि तेक्वान्दो, कराते सिक। आफूलाई मजबुत बनाऊ। अनि छोरीहरुको आत्मरक्षामा सहयोगी बन। सिंगो पुरुषबाट महिलाहरुले भयभित हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने संवाहक बन।
तिमीजस्ता छोराहरुलाई हुर्काउँदा नै तिमी बलियो हौ, जे पनि गर्न सक्छौ भनेर हिम्मत भर्ने आमाहरुले नै छोराहरुको मर्यादाको सिमाना पनि कोरिदिन बिर्सिए कि! छोरीलाई साँझ पर्नुअघि दैलो नटेके अत्तालिने आमाहरुले छोरा मध्यरातमा घर पुग्दा अब छोरो हुर्कियो भनेर सन्तोषको श्वास मात्र लिए कि!
छोरा, म ती आमाहरुको सूचीमा पर्न चाहन्न जसले छोरा र छोरीका लागि फरक सीमा कोरिदिए। तिमीलाई यो संसार देखाउन आफू मृत्युको मुखसम्म पुग्न राजी हुने आमा हुँ म। मलाई डर छ छोरा, तिम्रो खुसीमा रमाउँदा रमाउँदै तिमीलाई सीमारेखा बुझाइदिन बिर्सिन्छु कि?
तिमी विस्तारै हुर्कदै छौ। तेस्रो वर्ष पार गर्यौ। विस्तारै चौथो, पाँचौं हुँदै वर्षहरु पार गर्दै अघि बढ्नेछौ। तिमी अघि बढ्दै जाँदा तिम्रा यात्रामा भेटिएका कुनै केटीमान्छेलाई हैरानी दियौ दिएनौ सोध्न पो बिर्सिन्छु कि?
सार्वजनिक यातायातमा मैले भोगेजस्तै दुर्व्यवहार अर्की निर्दोष केटीले तिमीबाट भोग्नुपर्छ कि? कतै तिमी माझी औंला देखाएर आफ्नो यात्रामा हिँडिरहेकी छोरीलाई भोलिपल्टदेखि त्यो बाटो नै हिँड्न तर्सिने पो बनाउँछौ की?
तिमीले आफ्नै घर सुरिक्षत बनाउनेछौ। त्यसपछि तिमी वरपरको समाज। आफू बदलिए संसार बदल्न केही गाह्रो छैन छोरा। अघि बढ तिम्रो समानताको पाइलामा सधैँ साथ रहनेछु।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २, २०७७, ०१:३२:००